Sina: tranonkala iray fitadiavana asa nakatona noho ny fanohanana ny fitokonan’ny mpiasan’ny Honda · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Jolay 2010 18:58 GMT
Lahatsoratra navoakan'i Oiwan Lam amin'ny teny anglisy tao amin'ny tranonkala Advocacy
Tamin'ny andro (8 Jona) rehefa namoaka ny taratasiny momba ny politikany mikasika ny aterineto ny Filankevi-pirenena Sinoa, manipika ny lanjan'ny hevitry ny olona ao amin'ny aterineto ho fanaraha-maso ny asam-panjakana, dia tranonkala fikarohan'asa iray (zggr.cn) no noterena hikatona noho ny famoahana “lahatsoratra tsy dia mazava loatra”.
Ilay lahatsoratra nolazaina fa tsy mifandraika amin'io dia fanambarana nosoniavina mpianatra 11 avy amin'ny sekoly ambaratonga ambony ao an-toerana sy manam-pahaizana 60 avy any ivelany ho fanohanana ny fitokonan'ireo mpiasa Sinoa ao amin'ny orinasa Honda. (dikanteny Anglisy ny fanambarana)
Raha ny voalazan'ilay taratasy misokatra tao amin'ilay tranonkala, dia nanoratra ho an'ireo manampahefana any Beijing ry zareo tamin'ny 12 Jona ary nangataka ny fanokafana indray ity tranonkala ity, nefa na dia teo aza izany, dia mbola tsy mbola nisy valinteny azo. Niantso ny birao mpandrindra ny aterineto ihany koa izy ireo nefa dia tsy nanome valin-teny mazava izy ireo.
Ilay tranonkala, nantsoina taloha hoe Chine Labour (zggr.org), dia nisokatra ny 1 May 2005 ary voasoratra ara-dalàna ao amin'ny mpiandraikitra izany. Tamin'ny 2006, dia voatery nikatona ity tranonkala ity noho ny famoahany fanambarana iray ho an'ireo mpiasan'ny Kongresy avy amin'ny fikambanamben”ireo mpiasam-bahoaka. Niteny izy ireo fa tsy ara-dalàna ity tranonkala ity noho izy tsy nadoa ny 10 tapitrisa RMB amin'ny fandraketana azy tahaka ny vavahadim-baovao. Voatery nanova ny asan'ity tranonkala ity ho toy ny blaogy fikarohana asa izy ireo. Tamin'ity indray, dia noho ny famoahana “lahatsoratra tsy mifandraika amin'ny asan'ny tranonkala nefa tsy nahazoan-dalana hamoaka izany”.
Ny taratasy misokatra, izay miampitapita avy amin'ny mailaka, dia nalefa ho an'ny talen'ny Biraon'ny Filankevi-panjakana momba ny fampahalalam-baovao miadidy ny aterineto ary manakiana ny fankahalany an'ity tranonkala miaro ny kilasin'ny mpiasa ity.